Ogaden News Agency (ONA) – Baarlamaanka Soomaaliya oo Ansixiyay Xukuumada R/W Khayre.
Baarlamaanka Soomaaliya oo Ansixiyay Xukuumada R/W Khayre.
Posted by ONA Admin	/ March 30, 2017
Xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyey xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo dhisay Ra’iisul-wasaare Xasan Cali Kheyre.
Tiro gaadhaysa 224 oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka ayaa ogolaaday xukuumadda, waxaana diiday 15 xildhibaan, halka ay ka aamuseen 2 xildhibaan. Kulanka ayaa waxaa guud ahaan fadhiyey 241 xildhibaan, waxaana shir guddoominayey guddoomiye ku xigeenka 1aad ee baarlamanka Cabdi Weli Sheekh Ibraahim Muudey.
Khudbad uu u jeeediyey xildhibaanada ka hor inta aan la ansixin xukuumadda, ayuu Ra’iisul-wasaare Kheyre ku sheegay in xukuumadda ay ahmiyadda 1aad siin doonto sugidda amniga. “Amni la’aantii nolol ma jirto” ayuu yidhi Ra’iisul-wasaare Kheyre.
R/W Khayre ayaa sidoo kale sheegay in howsha ugu horreysa ee iminka hortaalla xukuumadda cusub ay tahay in gurmad la gaadhsiiyo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen gobollo badan oo dalka ka mid ah. Wasiirada cusub ayaa isla maanta lagu dhaariyey xarunta baarlamanka Federaalka Soomaaliya.